Inona no dikan'ny Mass im Chemistry?
Famaritana betsaka momba ny asan'ny chimie
Famaritana ny loha sy ny ohatra
Ny Mass dia ny fananana izay maneho ny habetsaky ny olana ao anatin'ny ohatra iray. Ny mass matetika dia voalaza amin'ny gram (g) sy kilograma (kg).
Mety ho heverina ho toy ny fananana zava-manahirana ihany koa ny lanjany, izay mahatonga azy io ho tandindona hanohitra ny fanaparitahana. Ny habetsaky ny zavatra iray dia misy, ny fahasarotan'ny fanaparitahana azy io.
Ny lanjan'ny zavatra iray dia miankina amin'ny volany, fa ny teny roa dia tsy midika hoe zavatra mitovy.
Ny herin'ny tavy dia ny herim -pahaizana ara-pôlitika:
izay misy lanjany W, m isa, ary g dia fitaterana noho ny herin'ny maizina, izay eo amin'ny 9,8 m / s 2 eto an-tany. Noho izany, ny lanjany dia voatatitra araka ny tokony ho izy amin'ny fampiasana kilaometatra kg · m / s 2 na Newtons (N). Na izany aza, satria ny herin'ny zava-manan'aina rehetra ihany eto an-tany dia mametraka ny ampahany "g" amin'ny alàlan'ny fifangaroan-kaonty ary mitatitra ny lanjany ao anatin'ireny vondrona ireny. Tsy marina izany, saingy tsy miteraka olana ... mandra-pialanao ny tany!
Amin'ny planeta hafa, ny sandajy dia manana lanjany hafa, ka ny lanjany eto an-tany, raha manana ny habeny mitovy amin'ny planeta hafa dia hanana lanja hafa. Lehilahy 68 kg eo ambonin'ny tany no handanja 26 kilao amin'ny Mars ary 159 kg eo amin'ny Jupiter.
Ny olona dia ampiasaina mba hihaino ny lanjany izay voalaza ao amin'ny vondrona iray ihany, fa tokony ho fantarina fa ny massa sy ny lanjany dia tsy mitovy ary tsy manana ny singa mitovy.
Ny fahasamihafana eo amin'ny lanjany sy ny lanjany
Fifandimbiasana eo anelanelan'ny volavolan-dalàna sy ny volany
Famaritana ny fiovaovan'ny fiovan'ny chimie
Famaritana sy ohatra amin'ny Microliter
Ny ohatra nomen'i Gay-Lussac momba ny gazy
Famaritana ny Air amin'ny Siansa
Famaritana ny Bronsted-Lowry Base
Famaritana sy ny ohatra asehony
Ny tarehin-javatra momba ny tarehy biby dia tsy tianareo fantarina
Ny Tranon'ny Ionic Radius ao amin'ny Tahan'ny Periodika
Ahoana no hamakiana haingana soratra be dia be
10 Facts mahavariana momba ny vorona
Nancy Astor: Vehivavy voalohany mipetraka ao amin'ny Trano Commons
Inona no tokony hataonao raha tsy misy chimie ianao?
Kitapo manga - lehibe lehibe
10 Zavatra Hahafantarana An'i Jimmy Carter
"Izaho no Teddy" Taratasy karana
Mamorona ny fanazavana ny halaliny sy ny habaka
Ireo Top 25 Viral Kids Videos
Ahoana no fomba hananganana fampiharana tsotra momba ny GUI (miaraka amin'ny code JavaFX ohatra)
Vocabulary manan-danja amin'ny teny anglisy
Bar Mitzvah Feon-kira sy Fankalazana
Ireo Tetikasa Ara-javakanto ao amin'ny Mosquée
Conditions d'emploi Spanish
The Devil's Scariest Potential and Exorcism Movies
Sary mpampiasa maoderina: fametrahana Tk
Ny haingo marevaka indrindra amin'ny tantaran'i Amerika Latina